केही महिना अघि एक दशकको अमेरिका बसाईपछि सरोज खनाल नेपाल फर्किए। निकैनै चर्चा भयो उनी फर्केकोमा। (यद्यपी केहि दिनदेखि फेरि अमेरिकामै छन् उनी। एउटा कार्यक्रम लिएर उनी अहिले पश्चिम अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियामा छन्।) अघिल्लो वर्षमात्र नायिका गौरी मल्ल अमेरिकालाई बाइबाइ भन्दै फर्किएकी थिइन्। त्यसो त लेखिका÷अधिकारवादीका रुपमा पहिचान बनाइसकेकी अमृता…
[विशेष रिपोर्ट] राहतमै लुट - कृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं चैत्र ६, २०७२- सिंहदरबारको सबैभन्दा आवतजावत हुने ढोका सामुन्नेकै अड्डा हो, जिविस । भूकम्पपिडितलाई सरकारले सबैभन्दा पहिले बाँडेको राहत त्रिपाल खरिदमै सिंहदरबार सामुन्नेको जिविसमा खुलमखुला घुसखोरी चल्यो । त्रिपाल विक्रेता न्यू पशुपतिका सप्लायर मिथिलेश तिवारीले भुक्तानी लिने क्रममा जिविस कार्यालयमै गएर स्थानीय…
मोतिलाल सिंहको हराएको इतिहास - हिमेशरत्न वज्राचार्य, काठमाडौं चैत्र ६, २०७२- सन् १८५० मा जंगबहादुर राणा बेलायत गएका थिए । उनीसँगै ठूलो टोली थियो, २५ जनाको । त्यति बेला बेलायतीहरूका लागि जंगबहादुर ठूलो सनसनी सावित भएका थिए । द टाइम्सले लेखेको थियो, ‘महारानीसामु प्रस्तुत हुने उच्च जातिका हिन्दु उनी नै…
पोखरा फर्किनु थियो । त्यो दिन बिहानै हतार–हतार गरेर कान्तिपथ पुगें । पोखरा र चितवन जाने बसको लाम लागिरहेको थियो । म चैं न्युरोड ट्राभल्समा जाने कुरा फाईनल भयो । झ्यालको सिट आफ्नो नाउमा सुरक्षित गरेँ । मेरो साईडको सिट खालि थियो । यात्रीहरू उक्त खालिसिटमा बस्ने नजरले आईरहेका हुन्थे,…
सादगी सुशील कोइराला ६ दाजुभाइ र ६ दिदीवहिनीको परिवारमा हुर्किए। तर उनी आफैंले भने परिवारको संख्या बढाएनन्। उनले अविवाहित जीवन नै रुचाए। पारिवारिक थातथलो नेपालगञ्ज भएपनि सुशील विराटनगरमा जन्मिए। अध्ययन गर्न वीरगञ्ज पुगे। त्यहाँस्थित ठाकुरराम हाइस्कुलमा अध्ययन गर्ने क्रममा उनी २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनबाट राजनीतिमा लागे। त्यसयता उनले…
आफुलाई मन परेको फिल्म, अभिनेता र अभिनेत्रीलाई जिताउनका लागि दर्शकहरुले एसएमएसमार्फत भोट गर्नुपर्ने हुन्छ । मन परेको फिल्मलाई भोट गर्नका लागि GFA टाईप गरि एउटा स्पेस दिएर PF टाईप गरि फेरि स्पेस दिएर फिल्मको कोड नम्बर लेखेर ४२४३ मा सेन्ड गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै चर्चित अभिनेतालाई भोट गर्न GFA टाईप गरि…
माघ १ शुक्रबार | प्रशाको ज्यान जोगाउन जुट्दै नेपाली न्यूर्योक : आठ वर्षअघि मेकानिकल इन्जिनियर बन्छु भनेर अमेरिका छिर्दा प्रशा तुलाधरले आफुलाई यस्तो बिपत्ति आइपर्ला भनेर कल्पनासम्म गरेकी थिइनन् । २३ वर्षको उमेरमा न्युर्योक युनिभर्सिटीको पोलिटेक्निक इन्टिच्युटमा अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा आफुलाई फोक्सोसम्बन्धी रोग ‘पोल्मोनरी फिब्रोसिस’ लागेको थाहा पाएपछि उनी अति नै…
I was on morning walk today. Early at the premises of MALEPATAN area, I got to see trashes and waste materials throwing all over in the open space so calledapicnic area near Resham Kheti and Dharapani route. Actually itsabeautiful place from where we can view amazing…
थोत्रो नोकिया फोन एक बिहानै बज्न थाल्यो ,हिजो अबेर सम्म काम गरेकोले मलाई निन्द्रा पुगेको थिएन,त्यही पनि जसो तसो आँखा मिचेर फोन हेर्दा नयाँ नम्बर थियो । फोनको रिसीब बटन थिच्ने बितिकै उता एउटा चिर परीचित महिलाको आवाजमा भनिन् "हेल्लो मलाई चिन्नु भयो ? म छांया" उनको आवाज सुन्ने बितिकै…